SAGA Air cooler အား ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
SAGA Air cooler
ကြည့်သူအရေအတွက်: 279 (+1)
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) 23-04-2018
ယခုလို အလွန်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ စိတ်တွေ ရှုပ်ပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ်
ဘာပဲ ၀ယ်ဝယ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေလား ?
စိတ်အေးအေးနဲ့ ပစ္စည်း ကောင်းများကိုမှ ရွေးချယ်
ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တော်ပြီး Qualityကောင်းမွန်သော
SAGA Air cooler? က အသင့်တော်ဆုံးပါ...
မိတ်ဆွေတို့ အိမ်အခန်းအတွင်း မည်သည်နေရာတွင်မဆို
ထားရှိနိုင်ပြီး ပူအိုက်လွန်းလှသည့် ယခု နွေရာသီကို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ
အေးချမ်းမှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ SAGA Air cooler က
1 YEAR WARRANTY ပါရှိသည့် အတွက် စိတ်ချယုံကြည်စွာ
အသေးစိတ်ကို Cb (သို့) Viber များတွင် မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
09254608239 ,Viber -09977482433
ရောင်းချပေးနေသော“ Eco Asia Myanmar ’’
Online Shop ကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာမေးမြန်း
အမည်: SAGA Air cooler